परम्परागत खाना प्रवर्द्धनका लागि ‘ज्वाइँ खाना’
धरान (अस) । होटल तथा रेस्टुराँमा खाना खाने व्यक्तिलाई केही फरक स्वाद र शैलीमा खाना खुवाउने उद्देश्यले धरानमा ‘ज्वाइँ खाना’ रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको छ । केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक साउदी गएर फर्केका सिन्धुपाल्चोकका हरि श्रेष्ठले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१० पुतलीलाइन भ...
ताप्लेजुङमा सभा, समारोह नगर्न आग्रह
ताप्लेजुङ (अस) । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन मेला, भेला, सभा, समारोह जस्ता कार्य नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ताप्लेजुङले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । विश्वभर आक्रामक रूपमा फैलिरहेको भाइरसबाट नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेकाले प्रशासनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । ताप्लेजुङ...
शाखा अधिकृतसहित आठ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा
सुनसरी (अस) । मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको कीर्ते औंठाछाप लगाई अर्कै व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गरेको अभियोगमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृतसहित आठजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत राजेन्द्र धिमाल, मालपोत का...
जिल्ला अस्पताल फाप्लुलाई ३० लाखको उपकरण
फागुन २१, सोलुखुम्बु । जिल्ला अस्पताल फाप्लुलाई रू. ३० लाख बराबरको उपकरण प्राप्त भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा प्रदेश नं १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको पहलमा लायन्स क्लब इन्टरनेशनलले प्रसूतिका लागि अति आवश्यक १२ प्रकारका उपकरण प्रदान गरेको हो । उपकरण हस्तान्तरण कार्यक्रममा...
धान भन्दै चिनीे तस्करी
विराटनगर । मोरङको आमतोला, रंगेली लगायत भारतीय सीमासँग जोडिएका ठाउँबाट धान भन्दै प्रहरीलाई झुक्याएर धानको बोरामा चिनीको तस्करी हुने गरेको खुलेको छ । व्यापारीले किसानबाट धान खरीद गरेको भनेपछि प्रहरीले पनि आवश्यक बिल बिजक माग्ने गरेको छैन । यसैको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले चिनी तस्करी गरेको पाइएको छ ।&nb...
झापामा वनस्पति प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिँदै
भद्रपुर । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–८ राजकामतमा रू. १ करोड ३२ लाख लागतमा वनस्पति प्रशोधन केन्द्र बनाउन शुरू गरिएको छ । महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाले आठ कट्ठा जग्गा खरीद गरेर प्रदेश नं १ सरकारको रू. ७५ लाख अनुदानमा बन्न लागेको सो प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास भइसकेको संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार दा...
तालतलैयामा पार्क निर्माण तीव्र
सुनसरी (अस) । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयामा अत्याधुनिक पार्क निर्माण तीव्र बनाइएको छ । निजी क्षेत्रको रू. ५५ करोड लगानीमा निर्माण भइरहेको ‘वेट एन्ड डाइनो एम्युजमेन्ट एन्ड वाटर पार्क’को कामलाई तीव्रता दिइएको हो । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष...
भोजपुर । भोजपुरको दक्षिणी भेगमा अवस्थित कावा खोलामा पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको छ । भोजपुर–मानेभज्याङ–रानीबास–घोडेटार सडकखण्ड अन्तर्गत पर्ने सो खोलामा आगामी असारमा सम्पन्न गर्नेगरी पक्की पुलको शिलान्यास गरिएको हो । स्वीस सरकारको करीब रू. ५ करोड अनुदान रहेको उक्त पुल ४५ मिटर...
झापामा मकैजोन कार्यक्रम : संघीय सरकारबाट १ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन
फागुन १३, झापा । झापा गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा मकैजोन कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका कृषक मकैखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । झापा गाउँपालिकाको वडा नं ६ र कनकाई नगरपालिका–५ मा गरी ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकैजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएसँगै यहाँका कृषक मकैखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । धानपछि झापाम...